Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ụmụaka Aaron Wan-Bissaka Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
LB na-egosi Full Story of a Football Football with the nickname “Ududo”. Ụmụ anyị Aaron Wan-Bissaka Akụkọ nke a na-akọchaghị akụkọ ihe mere eme Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya nwere ike iwepụ ihe dị egwu. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Aaron Wan-Bissaka's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Aaron Wan-Bissaka Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, Aaron Wan-Bissaka a mụrụ na 26th nke November 1997 na London Borough nke Croydon na England. Ọ bụ nwa nke abụọ nke ụmụ abụọ nne ya mụrụ, Elizabet na nna ya, Ambroise.
Aaron Wan-Bissaka nne na nna Ambroise na Elizabeth.
Mba Britain na Congo nke agbụrụ agbụrụ nke sitere na mgbọrọgwụ nke Africa welitere ma nne na nna na New Addington na Croydon, bụ ebe o toro na otu nwanna nwoke tọrọ ya nke a na-akpọ Kevin.
Aaron Wan-Bissaka tolitere na Addington na Croydon tinyere nwanne nwoke nwoke tọrọ ya bụ Kevin (N'aka ekpe).
N'ịbụ onye tolitere na New Addington, Wan-Bissaka riri ahụ ịgba bọọlụ kemgbe ọ dị obere.
Ịhụnanya ya maka egwuregwu ahụ amabeghị oke ma na -eme nke ọma ebe ọ bụla a na -adọta ike ndọda gụnyere ụlọ ezinaụlọ ya.
N'ihi ya, ụfọdụ arịa ndị na-adịghị agbanwe agbanwe n'ime ụlọ ahụ, gụnyere ụlọ ndị a na-agbaji agbaji bụ ihe nbibi nke ịgba mbọ na-agba ọsọ nke ụlọ-agba nke Wan-Bissaka.
Nwa okorobịa bụ Aaron Wan-Bissaka mebiri ụlọ ọrụ iko a site na ịgba bọl na ime ụlọ.
Biography Aaron Wan-Bissaka-Mmụta na Nrụpụta Ọrụ:
Usoro agụmakwụkwọ Wan-Bissaka gụnyere ọmụmụ ya na Good Shepherd Catholic Primary & Nursery School na New Addington, England.
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, Wan-Bissaka jikọtara agụmakwụkwọ na ịgba bọọlụ n'ụlọ akwụkwọ, n'ogige ntụrụndụ na n'okporo ámá.
Nwa okorobịa Aaron Wan-Bissaka na-egwu bọl na ebe a na-amaghị ama.
Ka ọ na-erule oge Wan-Bissaka dị afọ 11, talent ya bịara doo anya, mmepe nke mere ka edebanye aha ya na Crystal Palace agụmakwụkwọ ebe ọ malitere ịmalite ọrụ ya na football.
Aaron Wan-Bissaka Biography - Ndụ Mmalite Ndụ na Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Crystal Palace wee ghọọ ụlọ ịgba egwú ebe Wan-Bissaka ga-eji ọrụ ntorobịa ya dum. Otú ọ dị, njem ahụ adịghị amasị akụkụ dị mma nke ntinye ederede nke e ji mee ihe na nke a.
N'afọ abụọ n'ime ala, Wan-Bissaka ga-atụle ọzụzụ ma ọ bụ na-atụgharị oge na-achọ nnọọ ike ọgwụgwụ. Iji mee ka okwu sie ike, onye ahụ 14 kwa afọ na nzuzo zoro nri na-ezighi ezi nke gụnyere coke, ihe ọṅụṅụ ọkụ, ọkụkọ na ibe.
N'elu ọnụ ọgụgụ ọjọọ nke Wan-Bissaka, Crystal Palace tụlere ịhapụ ya. Otú ọ dị, nzukọ ya na nna nwata ahụ - Ambroise - mere ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nye ya oge ọhụụ ọnwa atọ.
Biography Aaron Wan-Bissaka-Bilie na Akụkọ Ama:
N'ịji oge nke oge a na-eme ihe nke ọma, Wan-Bissaka masịrị ya nke ukwuu wee bilie n'ogo nke afọ 5 (2011-2016) na-esote. Na-aga n'ihu, Wan-Bissaka malitere igosi Crystal Palace akpa mbụ na oge okpomọkụ nke 2017 tupu oge njem site na-akpọ na ọtụtụ enyi.
Ọ mere ọkwa izizi ya maka Crystal Palace n'oge egwuregwu Premier League megide Tottenham Hotspur na 25th nke February 2018 wee kwụghachi ya ụgwọ na njiri mara egwuregwu bọọlụ na -esote.
N'oge na -adịghị anya tupu akpọrọ ya onye ọkpụkpọ Crystal Palace nke Ọnwa nke Machị 2018 wee bụrụ onye ọkpụkpọ klọb nke oge 2018/2019. Ndị ọzọ, dị ka ha na -ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ mmekọrịta Aaron Wan-Bissaka:
Wan-Bissaka alọtabeghị n'oge edere ihe ọmụmụ a. Anyị na -ewetara gị akụkọ gbasara akụkọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ọnọdụ mmekọrịta ya ugbu a.
Iji malite, Wan-Bissaka amaghị na ya na nwanyị ọ bụla nwere mmekọ, ọ nweghịkwa enyi nwanyị dịka nke May 2019.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-agọnahụ eziokwu ahụ bụ na ụmụ nwanyị na-achọ Wan-Bissaka. Otú ọ dị, ndị gụsịrị akwụkwọ na Crystal Palace bụ ndị na-enweghị nwa ma ọ bụ nwa (s) n'alụmdi na nwunye na-abụghị di na-elekwasị anya na-arụ ọrụ ya n'ọtụtụ dị elu.
Ndụ Aaron Wan-Bissaka:
Wan-Bissaka si n'azụ ezinụlọ. Anyị na-eme ka ị mara ihe gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere Nna Wan-Bissaka: Ambroise bụ nna Wan-Bissaka. Nna na-akwado ụmụ abụọ bụ nwa amaala Congo bụ onye na-agba bọl maka ndị otu ime obodo tupu ọ gbapụ mba Africa nke agha tisasịrị n'afọ 1997.
A na -enye ya otuto maka ịrụ ọrụ ịchụ àjà nke akwadoro ịhụ na ụmụ ya nwoke bịara maka ọzụzụ bọọlụ n'oge ndụ ha.
Aaron Wan-Bissaka na nna ya Ambroise.
Banyere mama Wan-Bissaka: Elizabeth bụ mama Wan-Bissaka. Dị ka di ya na ụmụ ya, Elizabeth bụ Gunner ogologo afọ ma ọ bụ onye na-akwado Arsenal.
Agbanyeghị, ọ na -akwado Crystal Palace na -atụle eziokwu ahụ bụ na ọ bụ klọb mere ka nwa ya nwoke bụrụ onye ama. A na-enye ya otuto maka inye Wan-Bissaka nlekọta nlekọta nne kacha mma n'oge ọ bụ nwata na inye nkwado omume mgbe ọ kacha chọọ ya.
Aaron Wan-Bissaka na nne ya Elizabeth.
Banyere ụmụnne nwanne Wan-Bissaka: Wan-Bissaka enweghị nwanne (s) mana nwanne nwoke nke okenye akpọrọ Kevin. Ụmụnne abụọ ahụ toro na -egwu bọọlụ n'okporo ámá na n'ogige ntụrụndụ.
Agbanyeghị, Kevin edebanyeghị aha na agụmakwụkwọ nke nnukwu ọgbakọ. Ọ na -egwuri egwu ma ọ bụ Kingstonian na Walton Casuals tupu eyiri akpụkpọ ụkwụ ya mgbe ọ dị afọ 21.
Aaron Wan-Bissaka nwanne Kevin hụrụ 2nd site n'aka nri na foto ezinụlọ.
Banyere ndị ezinụlọ Wan-Bissaka: Site na ezinụlọ Wan-Bissaka, amachaghị banyere nne na nna nna ya yana nna nna ya na nne nne ya.
Tụkwasị na nke a, a ka amatabeghị nwanne nne na nna Wan-Bissaka n'ihe omume ama ama nke akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya. Otu gafee osisi maka ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ndụ Aaron Wan-Bissaka nke Onwe:
Kedu ihe na-eme Wan-Bissaka akara?. Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị ịme nke omume Wan-Bissaka iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Iji malite, onye Wan-Bissaka bụ ngwakọta nke àgwà Sagittarius Zodiac.
Ọ bụ onye obi siri ike, onye nwere ezi uche, nke dị mma na nke na-egosi n'ụzọ doro anya na ọ dị ndụ na nke onwe ya. O nwere nanị ihe gbasara ntụrụndụ na ihe omume ntụrụndụ na-agụnye ịmepụta, igwu egwuregwu vidio na igwu mmiri.
Igwu bụ otu n'ime ọrụ mmemme nke Wan-Bissaka.
A na-enyocha ọnụ ahịa Wan-Bissaka n'oge edere. Agbanyeghị, ọ nwere ọnụ ahịa ahịa nke Million 25,00 Nde.
Nyocha nke ụgwọ ọnwa azụ azụ na usoro mmefu ego na -egosi na ọ na -ebi ndụ na -agbanwe agbanwe nke onye ọchụnta ego na ọtụtụ ego ọ na -enweta sitere na mbọ bọọlụ ya.
Ka ọ dị ugbu a, amachaghị banyere ezigbo ọnụ ụlọ ọ bi na nchịkọta ụgbọ ala ya ebe ọ na -ahụkarị ka ọ na -anya ụgbọ ala n'ogige maka ọzụzụ ma ọ bụ na -aga emume inye onyinye.
Na agbanyeghị, ọ maara ka esi eme ezumike na ebe ntụrụndụ dị ọnụ ala gburugburu ụwa.
Eziokwu nke Aaron Wan-Bissaka:
Iji mechie akwụkwọ akụkọ Wan-Bissaka nke nwata bụ akụkọ a na-akọwaghị ma ọ bụ nke amachaghị nke na-esighi na ya.
Wan-Bissaka nwere tattoos na-enweghị ike ịghọtacha ihe nke a ga-eme ka a mara dị ka n'oge ederede.
Ndị isi egwuregwu football bụ Manchester United, Chelsea na Manchester obodo na-achọ ya n'ebe niile n'oge ọ na-ede akwụkwọ.
Banyere okpukpe ya, a mụrụ Wan-Bissaka ma zụlite dịka Onye Kraịst. Karịsịa, ọ gara ụlọ akwụkwọ Katọlik. Otú ọ dị, ọ ka na-ekwupụta okwu banyere okwukwe.
Ezi azụ bụ otu n'ime egwuregwu ole na ole ka a na-ahụtụbeghị aṅụ ma ọ bụ ise siga.
Aaron Wan-Bissaka Biography Video Nchịkọta:
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Aaron Aaron-Bissaka Ụmụaka akụkọ ya na eziokwu efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.